Ny namana tsara Adam Small dia manana sehatra marketing an-tsoratra finday izay mahita ny tahan'ny fanavotana amin'ny tolotra SMS. Teknika iray notantarainy tamiko ny momba ny mpanjifa iray nanolotra tolotra ho an'ny namana izay nahazoanao fikororohana maimaim-poana rehefa nitondra namana tany amin'ny orinasa ianao. Nandefa ny antsasak'adiny izy ireo alohan'ny sakafo atoandro ary hisy tsipika mivoaka ny varavarana. Hevitra lehibe izany satria tsy izany no izy
Amin'ny seho Edge of the Web Radio amin'ity herinandro ity sy podcast, miresaka momba ny varotra an-tserasera izahay sy ny dingana tokony hataon'ny orinasa hanatsarana ny varotra an-tserasera. Tamin'ny fampahalalana vaovao nozarainay farany, ny Andraikitry ny Data ao amin'ny làlan-tserasera mividy, dia misy vitsivitsy milaza momba ny personalization sy ny fomba mampitombo ny fisokafana, ny tsindry ary ny fanovana avy amin'ny fampielezana mailaka. Saingy tsy tokony hoferana amin'ny fandefasan-kafatra mailaka fotsiny izany, tokony haparitaka manodidina anao ny personalization
Google dia manitatra ny fivelarana amin'ny fizarana tapakila nomerika miaraka amin'i Zavers. Zavers dia mamela ny mpivarotra hividy tapakila mahitsy ho an'ny mpiantsena marina, hanitatra fandaharana valisoa ary hanaraka ny fanavotana amin'ny fotoana tena izy. Hitan'ny mpiantsena ny fihenam-bidy ataon'ireo mpanamboatra amin'ny tranokala mpivarotra ankafizin'izy ireo ary ampidiro ao anaty karapan'izy ireo ny tapakila nomerika. Ny tahiry dia alaina ho azy eo amin'ny toeram-pisavana rehefa mamafa ny karatra valim-panadinana na miantso ny laharan'ny telefaona ny mpividy - tsy misy scanning na fanasokajiana ara-batana
SmartPhones sy ny tapakila miasa
Asabotsy, Jona 30, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Adam Small
Ny zavatra iray izay tsikaritray hatrizay fa niasa tamin'ny finday dia ny fahafaha-mandefa fihenam-bidy amin'ny telefaona. Na hafatra an-tsoratra nalefan'ny trano fisakafoanana na fampiharana mampiseho fihenam-bidy, ny finday no mpanelanelana tonga lafatra amin'ny fanavotana ny tapakila. Nahoana? Io ihany no teknolojia entin'ny mpanjifa rehefa vonona ny hividy izy ireo. Avy amin'ny couponCabin: miaraka amin'ireo fampiharana tsy tambo isaina mitazona ny tompony finday avo lenta ny mpampiasa ankehitriny